Python3 Lesson3- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python3 Lesson 3
Python3 Lesson 3
by KhitMinnyo on November 23, 2017 in Python-for-Hackers
Using Comment in Python
မနေ့က ကျွန်တော် နမူနာပြခဲ့တဲ့ python program အသေးလေးကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။
ကျွန်တော်ရေးပြခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ်မှာ အစဆုံးကနေ စပြီး တစ်ပိုဒ်စီရဲ့ အစတိုင်းမှာ # ခံရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေ တွေ့ရမှာပါ။
Program ကို RUN ကြည့်တဲ့အခါ ထိုစာလုံးတွေ ပေါ်မလာတာကိုလည်း သတိထားမိကြမှာပါ။ အဲဒါကို comment လို့ ခေါ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ မှတ်စု ကို ထည့်သွင်းမှတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဆွေးနွေးမှာက comment ကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ ဆိုတာပါ။
Program တွေ ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုပြီး ရှုပ်ထွေးလာကြသလို ဖတ်ရတာလည်း ပိုပိုခက်လာပါတယ်။ ပရိုဂရမ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ရှာဖွေရတဲ့အပိုင်းတွေ ပြင်ဆင်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေကို ပြန်ရှာရခက်သွားတယ်။ အဲသလိုပဲ
ကိုယ်ရေးခဲ့တုန်းက ဒီအပိုင်းက ဘာလုပ်ဖို့ ရေးခဲ့တာ။ ဘာကြောင့် ရေးခဲ့တာ စတာကို ပြန်တွေးရ စဉ်းစားရတာကလည်း ပိုခက်လာပါတယ်။ ရေးခဲ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်းထဲမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ နားလည်လွယ်မယ့် မှတ်သားချက် တစ်ခုခု ထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ စိတ်ကူးမိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ idea လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အဲသလို ထည့်သွင်းမှတ်သားထားတဲ့ မှတ်စုတွေကို Python မှာ comment လို့ ခေါ်ပါတယ်။ # ခံရေးရပါတယ်။ Enter မနှိပ်မချင်း
အဲသည်စာတန်းကို ပရိုဂရမ်မာရဲ့ မှတ်စုလို့ စက်က သတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ြ်ပီး run တဲ့အချိန် ထုတ်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Program ကို ပြန် စစ်ဆေးတဲ့အခါတွေမှာလည်း ဒီ note လေးတွေ ဖတ်ပြီး အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်စဉ်းစားရတာ အချိန် တိုနဲ့ ပြီးသွားတာပေါ့။
ဒီတစ်ခါတော့ Variable အမည် ရွေးချယ်ခြင်းကို ပြောပြပါမယ်
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ variable တွေ အမျိုးမျိုးတော့ သတ်မှတ်ရေးသားနေကြပါတယ်။ variable တစ်ခုစီအတွက် နာမည်ရွေးချယ်မှုပိုင်းကအစ ဘယ်လို သတ်မှတ်ယူရတယ်ဆိုတာမျိုး ခုထိ မပြောရသေးပါဘူး။
သင့်အနေနဲ့ python မှာ variable တွေ ပေးဖို့အတွက် အမည်များစွာကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ variable အဖြစ် ပေးလို့မရတဲ့ နာမည်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
Reserve Words တွေကို သင့်အနေနဲ့ variable အမည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သုံးမိခဲ့ရင် ပရိုဂရမ်က ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ရှုပ်ထွေးသွားမှာဖြစ်ပါယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အသုံးမပြုရမယ့် နာမည်တွေကို သိနေဖို့တော့ လို့ပါတယ်။
Reserved Keywords for Python Programming
Here isalist of the Python keywords. ဒါကို အဓိက မှတ်ပါ။
အထက်ပါ စကားလုံးတွေကတော့ Python Keywords တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Variable သတ်မှတ်တဲ့အခါ သူတို့ကို အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ ဒီစာလုံးတွေကို အလွတ်မရရင်တောင် သင်သုံးမိတဲ့အခါ သူက Orange အရောင်နဲ့ ပြပေးမှာဖြစ်လို့ သင့်အနေနဲ့ variable သတ်မှတ်လို့ မရမှန်း တန်းသိပါမယ်။ variable သတ်မှတ်တဲ့အခါ အနက်ရောင်စာလုံးသာ မြင်ရမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဥပမာ
IDLE3ဖွင့်ပြီး kmn =5လို့ ပေးကြည့်ပါ။ kmn ကို အနက်ရောင်နဲ့ မြင်ရမှာပါ။ အထက်ပါ keywords တွေထဲက class =5လို့ ရေးကြည့်ပါ။ class ရေးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း အရောင်ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
BlindElephant base64 imghdr reprlib
CDROM bdb imp requests
ChAP binascii importlib resource
DLFCN binhex inspect rfidiot-cli
IN binwalk io rlcompleter
OpenGL bisect ipaddress runpy
PIL brlapi isotype sched
PyQt4 builtins itertools scipy
TYPES bz2 jcopmifare select
__future__ c1218 jcopsetatrhist selectors
_ast c1219 jcoptool send_apdu
_bisect c1222 json serial
_bootlocale cProfile keyword shelve
_bz2 cairo lfxtype shlex
_codecs calendar lib2to3 shutil
_codecs_cn cardselect linecache signal
_codecs_hk caribou locale sip
_codecs_iso2022 cgi logging sipconfig
_codecs_jp cgitb loginall sipconfig_nd5
_codecs_kr chardet louis site
_codecs_tw chunk lsb_release sitecustomize
_collections cmath lzma six
_collections_abc cmd macpath smbc
_compat_pickle code macurl2path smoke_zephyr
_compression codecs mailbox smtpd
_crypt codeop mailcap smtplib
_csv collections marshal sndhdr
_ctypes colorsys math socket
_ctypes_test compileall matplotlib socketserver
_curses concurrent mifarekeys sod
_curses_panel configparser mimetypes speechd
_datetime contextlib miniterm speechd_config
_dbm copy mmap spwd
_dbus_bindings copyreg modulefinder sqlite3
_dbus_glib_bindings copytag mpl_toolkits sre_compile
_decimal crcelk mrpkey sre_constants
_dummy_thread createfontdatachunk multiprocessing sre_parse
_elementtree crypt multiselect ssl
_functools csv netrc stat
_hashlib ctypes nis statistics
_heapq cups nntplib string
_imp cupshelpers ntpath stringprep
_io curses nturl2path struct
_json cycler numbers subprocess
_locale datetime numpy sunau
_lsprof dateutil opcode symbol
_lzma dbm operator symtable
_markupbase dbus optparse sys
_md5 deb822 orca sysconfig
_multibytecodec debconf os syslog
_multiprocessing debian ossaudiodev tabnanny
_opcode debian_bundle painter tarfile
_operator deblaze parser telnetlib
_osx_support decimal pathlib tempfile
_pickle decorator pdb termineter
_posixsubprocess demotag pickle termios
_pydecimal difflib pickletools test
_pyio dis pig textwrap
_random distutils pilconvert this
_sha1 doctest pildriver threading
_sha256 dummy_threading pilfile thresholder
_sha512 eeprom pilfont time
_signal email pilprint timeit
_sitebuiltins encodings pipes tkinter
_smbc enhancer pkg_resources token
_socket enum pkgutil tokenize
_sqlite3 errno platform trace
_sre explode player traceback
_ssl faulthandler plistlib tracemalloc
_stat fcntl pn532emulate transit
_string fdxbnum pn532mitm tty
_strptime filecmp poplib turtle
_struct fileinput posix types
_symtable fnmatch posixpath typing
_sysconfigdata formatmifare1kvalue pprint unicodedata
_sysconfigdata_m formatter profile unique
_testbuffer fpectl pstats unittest
_testcapi fractions pty uno
_testimportmultiple froschtest pwd unohelper
_testmultiphase ftplib py_compile urllib
_thread functools pyasn1 urllib3
_threading_local gc pyatspi uu
_tkinter genericpath pyclbr uuid
_tracemalloc getopt pydoc venv
_warnings getpass pydoc_data viewer
_weakref gettext pyexpat warnings
_weakrefset gi pygtkcompat wave
abc gifmaker pylab weakref
aifc glob pyparsing webbrowser
antigravity grp pyqtgraph writelfx
apt gzip pytz writemifare1k
apt_inst hashid q5reset wsgiref
apt_pkg hashlib queue xdg
aptsources heapq quopri xdrlib
argparse hidprox random xml
array hitag2brute re xmlrpc
ast hitag2reset readlfx xxlimited
asynchat hmac readline xxsubtype
asyncio html readmifare1k zipapp
asyncore http readmifaresimple zipfile
atexit idlelib readmifareultra zipimport
audioop imaplib readtag zlib
အထက်ပါ စကားလုံးတွေက python ရဲ့ module တွေ ဖြစ်တာကြောင့် variable နာမည်တွေဟာ သူတို့နဲ့ မတူညီရပါဘူး။
သုံးမိခဲ့ရင် ဒီတိုင်းစမ်းကြည့်ရင်တော့ ရပေမယ့် module တွေ run တဲ့အခါတော့ ရှုပ်သွားတတ်ပါတယ်။
!= *= << ^
" + <<= ^=
""" += <= _
% , <> __
%= - == `
& -= > b"
&= . >= b'
' ... >> j
''' / >>= r"
( // @ r'
) //= J |
* /= [ |=
** : \_ ~
**= < ]
အထက်ပါ သင်္ကေတတွေဟာလည်း Symbols တွေ ဖြစ်လို့ variable နာမည် မထည့်ရပါဘူး။
Here isalist of available topics.
ASSERTION DELETION LOOPING SHIFTING
ASSIGNMENT DICTIONARIES MAPPINGMETHODS SLICINGS
ATTRIBUTEMETHODS DICTIONARYLITERALS MAPPINGS SPECIALATTRIBUTES
ATTRIBUTES DYNAMICFEATURES METHODS SPECIALIDENTIFIERS
AUGMENTEDASSIGNMENT ELLIPSIS MODULES SPECIALMETHODS
BASICMETHODS EXCEPTIONS NAMESPACES STRINGMETHODS
BINARY EXECUTION NONE STRINGS
BITWISE EXPRESSIONS NUMBERMETHODS SUBSCRIPTS
BOOLEAN FLOAT NUMBERS TRACEBACKS
CALLABLEMETHODS FORMATTING OBJECTS TRUTHVALUE
CALLS FRAMEOBJECTS OPERATORS TUPLELITERALS
CLASSES FRAMES PACKAGES TUPLES
CODEOBJECTS FUNCTIONS POWER TYPEOBJECTS
COMPARISON IDENTIFIERS PRECEDENCE TYPES
COMPLEX IMPORTING PRIVATENAMES UNARY
CONDITIONAL INTEGER RETURNING UNICODE
CONTEXTMANAGERS LISTLITERALS SCOPING
CONVERSIONS LISTS SEQUENCEMETHODS
DEBUGGING LITERALS SEQUENCES
အထက်ပါ topic တွေကိုလည်း variable name မှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
မသုံးရမှာတွေက များလိုက်တာ ဘယ်လိုမှတ်မိမလဲ လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ပိုင်းမှာ လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲက variables တွေထဲမှာ ဒီစာလုံးတွေ တစ်လုံးမှ မပါခဲ့တာက သက်သေပါပဲ။
တမင်သာမဟုတ်ရင် ဒီစာလုံးတွေကို variable name ပေးမိဖို့တောင် မရှိပါဘူး။ Keywords တွေသာ မှားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ Keywords တစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသေမှတ်ထားပါ။
မမှန်ကန်တဲ့ variable name ကို သုံးမိရင် အများဆုံး ပေါ်လေ့ရှိတာက Syntax error ပါ။ IDLE3 မှာ ရိုက်ကြည့်ပါ။
>>> kmn =5သတ်မှတ်လို့ ရပေမယ့်
>>> class = 6
ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ class ရေးကတည်းက အရောင် ပြောင်းနေတာ သတိထားမိရင် ခုလို ပေါ်စရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
နောက်တစ်ခု ကြည့်ရအောင်ပါ။ IDLE3 မှာပါပဲ။ ခုန အောက်မှာ ဆက်ရိုက်ကြည့်ပါ။
>>>bag name = 5
>>> ဘာမှ မပါဘဲနဲ့ ဘာဖြစ်တာလဲ မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်။ variable name တွေမှာ space ခြားထားလို့ပါပဲ။ Space ခြားလိုက်တဲ့အတွက် python က operand ၂ခု အနေနဲ့ မြင်သွားပါတယ်။ operator မပါတဲ့ operands အနေနဲ့ မြင်သွားလို့ error တက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် if နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
name = "Aye Aye"
if name == "Mg Mg":
print "Mg Mg, you have no permission to enter."
elif name == "Ag Ag":
print "Ag Ag, you have no permission to enter."
elif name == "Ma Ma":
print "Ma Ma, you have no permission to enter."
elif name == "Aye Aye":
print "Hello! Aye Aye, welcome to our admin team."
print "Sorry, you have no permission to enter."
ဒီနမူနာလေးကို ရှေ့တုန်းက သင်ခဲ့ပြီးပြီနော်။ အပေါ်ကြောင်းပဲ ဖြတ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။
name = "Aye Aye" လို့ variable သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
if name == if ဆိုတဲ့ operator နောက်မှာ ခုန variable name အဲပုံစံနဲ့ လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
bag name = ဆိုပြီး variable သတ်မှတ်လို့ မရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ variable ကိုလည်း bag name လို့ ပေးမှ တွက်ရ ပြန်ရှာရ လွယ်မှာ/
မခက်ပါဘူး။ ဒီလို ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
bag_name =5ဘာ error မှ မတက်တော့ပါဘူး။ အဓိကကတော့ space မခြားဖို့ပါပဲ။
SyntaxError: invalid syntax ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီခါ Run Time Error အကြောင်း ဆက်ရအောင်
ဒါကိုတော့ ကွန်ပျူတာ သုံးသူတွေ တွေ့ဖူးနေကျ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တွေ့ဖူးချင်မှလည်း တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းကစားရင်း time limit ကုန်သွားတဲ့ RUN Time Error ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
RUN တဲ့ အချိန်(time) မှာ လွဲချော်မှုကြောင့် error တက်တာပေါ့။ ဥပမာ သင်က variable မသတ်မှတ်ရသေးခင် variable ကို သုံးမိတယ်ဆိုပါတော့။ Run Time Error တက်လာမှာပါ။
နမူနာ စမ်းရအောင် ဖွင့်ထားတဲ့ IDLE ရှိရင် ပိတ်။ IDLE အသစ်သုံးပြီး စမ်းရအောင်။
NameError: name 'kmn' is not defined
kmn က ဘာ ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် မသတ်မှတ်ရသေးဘဲ ခေါ်သုံးမိတာကိုး။
>>> if kmn == 5:
*****enter ၂ချက် နှိပ်မှ ရမယ်နော်။******
if kmn == 5:
>>> ဒါလည်း ထို့အတူပါပဲ။ အစမှာ ဘာမှ မသတ်မှတ်ရသေးဘဲ သုံးမိတာကိုး။
တစ်ကယ်တမ်း ဖြစ်ရမှာက variable သတ်မှတ်ပြီးမှ ခေါ်သုံးရမှာပါ အောက်ပါအတိုင်းပေါ့
ခုန IDLE3မှာပဲ ဆက်ရိုက်လည်း ရတယ်။ အသစ်မှာလည်း ရပါတယ်။
>>> kmn =5(သတ်မှတ်လိုက်တယ်)
5 (ခေါ်သုံးကြည့်တာ အဖြေထွက်လာတယ်)
>>> if kmn == 2:
if kmn ==2လို့ ရေးထားခဲ့လို့ enter ၂ချက်ဆင်းတော့ else အဖြေ ထွက်တာပါ။ အပေါ်မှာ သတ်မှတ်ခဲ့တာက kmn =5ဖြစ်လို့ပါပဲ။ IDLE မှာ ရေးတဲ့ခါ else အကြောင်း မရေးခင် ရှေ့ကို ပြန်သွားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ဒီခါ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားမှာက Python Strings တွေကိုပါ။
Strings are lines of text that are declared with single quotes or double quotes. တဲ့။ သူ့ရဲ့ မူလ defination ကိုက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းပါတယ်။
Strings ဆိုတာဟာ single quote ('abcd') or double quotes ("abcd") ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်တဲ့။
>>> "Happy" + " " + "Birthday!"
>>> မျက်တောင်အဖွင့် အပိတ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ quotes တွေထဲမှာ ရေးရပြီး အစိမ်းရောင် စာလုံးလေးတွေနဲ့ IDLE3မှာ မြင်ရမယ့် စာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ string တွေကို တစ်ကြောင်းတည်း တစ်ပုံစံတည်းဖော်ပြဖို့ ခက်တဲ့အခါ ဒီပုံစံမျိုး သုံးပြီး ဖော်ပြရပါသေးတယ်။
>>> kmn = '''
There are many needs for large programs:
>>> print (kmn)
>>> kmn = ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာ triple quotes ကို အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ (' ' ') or (" " ") ပါ။ အဖွင့်နဲ့ အပိတ် တူဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး သုံးခုကို တစ်ဆက်တည်း ရိုက်သွားရပါမယ်။
Python is an Object-Oriented Programming language (OOP). Every piece of data and even functions and types are objects.
Python သည် bject-Oriented Programming language (OOP) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာ အပိုင်းအစတွေ ဖန်ရှင်တွေနဲ့ ပုံစံတိုင်းက Object တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်
စာလုံး အကြီးအသေး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ function လေးကို စမ်းကြည့်ပါဦး။
အထက်ပါ ဥပမာ ကို ရှင်းရရင် upper ဆိုတာ method တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ string နဲ့ တွဲဆက်နိုင် string ထဲက စာတွေကို စာလုံးအကြီးတွေချည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ method ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် variable သတ်မှတ်ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ variabel.upper() ပုံစံနဲ့ အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ lower လည်း upper လိုပါပဲ။ စာလုံးကြီးနဲ့ အသေးသာ ကွာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တွေးမိဖို့ လိုတာက data type တိုင်းက သူတို့ပေါ် သက်ရေက်မှုရှိမယ့် operation (methods) တွေကို သိကြတယ် ဆိုတာပေါ့။
String ပေါ် သက်ရောက်သော Methods များ
Strings တွေဟာ Operation ပေါင်းများစွာကို support ပေးပါတယ်။ ဒီ methods တွေရဲ့ list ကို dir("...") ဆိုတဲ့ built-in function ကို အသုံးပြုရရှိနိုင်ပါတယ်။
>>> dir ("")
s.replace(sub, replacement, count) ဆိုတဲ့ ပုံစံက အလွန် အသုံးများပြီး လိုအပ်တဲ့ ပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
s ဆိုတာက နမူနာ variable ပါ။ အပေါ်မှာ s- "Hello!" ဆိုတာ ပြောထားတာမို့ ဆက်ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
sub ကတော့ ကိုယ် အစားထိုး ဖြည့်သွင်းမယ့် sub လို့ မှတ်ပါ။
replacement ဆိုတာကတော့ ကိုယ် အစားထိုး ဖြည့်သွင်းမယ့် စကားလုံးပါ။
count ကတော့ အရေအတွက်ကို ပြတာပေါ့ဗျာ။
ကဲ ဒီတိုင်း နားမလည်ရင် ဥပမာလေးနဲ့ ကြည့်ရအောင်ဗျ
>>> s = '-123' ဒါက variable သတ်မှတ်တာ ရှင်းပါတယ်နော်
>>> t = s.replace('-', '', 1) t ကို s က ကိန်းကိုပဲ အစားထိုးမယ်လို့ ပြောလိုက်တာ။ အဲမှာ ဆက်ရှင်းပြရရင်
s.replace('-', '', 1)
sကို အစားထိုးမယ် ('-နေရာကို', ' 'ဘာမှ မဖြည့်ထားတာနဲ့ , တစ်ကြိမ် အစားထိုးမယ်ပေါ့။
>>> t tကို print ကြည့်တဲ့အခါ
'123' - နေရာ ဘာမှဖြည့်မထားတဲ့အတွက် ဘာမှ မရှိတော့တာ တွေ့ရပါမယ်။
ရှင်းသွားအောင် နောက်တစ်ခု ထပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
>>> p = '1, 1, 2, 2, 2, 3' p ကို variable သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
>>> q = p.replace('2', '3', 3) q ကျတော့ p တန်ဖိုးတွေထဲက2ကို3နဲ့3ခါ အစားထိုးမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
>>> q print လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ q တန်ဖိုးမှာ p မှာတုန်းက ရှိခဲ့တဲ့2သုံးလုံးနေရာမှာ ၃ သုံးလုံး အစားထိုး ရောက်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
'1, 1, 3, 3, 3, 3'
>>> s = '-123' ပထမဆုံးတစ်ခုပါပဲ
>>> t = s.replace('-', '', 1) - နေရာမှာ ဘာမှမရှိတာနဲ့ အစားထိုးတယ်
>>> t - ပျောက်သွားပြီ
>>> o = s.replace('-', '+', 2) - နေရာမှာ + နဲ့ အစားထိုးတယ်။ ၂ကြိမ် အစားထိုးမယ်လို့ ရေးမိထားတယ်။
'+123' +123 ဖြစ်သွားပြီ။ + တစ်ခုပဲ အစားဝင်လာတယ်။ ၂ခုမလာဘူး။ အကြောင်းကတော့ အစားသွင်းစရာ ၂ နေရာ မရှိလို့ ဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခု counting ထပ်လာပါမယ်။
>>> s = 'Once uponatime, there wasaking in the forest. His name was King Naung.'
>>> s.count('o') ဆိုတာက s ဆိုတဲ့ string ထဲက o အရေအတွက်ကို ရေတွက်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ o အသေးနော်။ အကြီးရေချင်ရင် အကြီး ရေးရမယ်။
အတွဲလိုက်ကိုလည်း ရှာဖွေ ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ စာတွေ အရမ်းများသွားရင် ရှာရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့။
အားလုံးကို ရေတွက်တာပါ။ စာလုံးရေ ၇၅ လုံး ရှိတယ်လို့ အဖြေထွက်ပါတယ်။ မယုံရင် ရေကြည့်ပါ။
space bar ချထားတဲ့အရေအတွက်ပါ။ အထက်ပါ ၂ခု မှားတတ်တယ်နော် သေချာကြည့် ရေးပုံလုံးဝ မတူပါ။ space ရေချင်ရင် ' ' ကြားမှာ space ခြားရပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ မှတ်ရအောင်ပါ။ အရမ်းများနေရင် မမှတ်မိမှာစိုးလို့
Python3 Lesson4ကြည့်ရန် ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
By KhitMinnyo on November 23, 2017